Fandaniana sy fanampiana avy amin'ny USDA ho an'ny fananana tokantrano tokantrano
Fandaniam-bola sy fanomezana ho an'ny fananana tokantrano tokantrano
Ny Sampan-draharahan'ny Fambolena Amerikanina (USDA) dia manolotra ny fampindramam-bola madinika sy tombontsoa ho an'ny tompon-trano tsy dia manana fidiram-bola loatra any amin'ny faritra ambanivohitra azo antoka ho an'ny fanatsarana sasantsasany any an-tranony. Ny singa manokana amin'ny Loja sy Grants Programa ao amin'ny USDA dia:
Fandraharahana ho an'ny tompon-trano manana fidiram-bola tena ambany ho an'ny fanamboarana, fanatsarana na fanavaozana ny trano. Ny trosa dia azo ampiasaina hanamboarana, hanatsara na hanavao ny trano, na hanesorana loza ara-pahasalamana sy fiarovana avy ao an-trano.
Manome toky ho an'ny tompon-trano mahafeno fepetra mahaleotena zokiolona. Ny fampindramana dia tsy maintsy ampiasaina hanesorana ireo loza ara-pahasalamana sy fiarovana avy ao an-trano.
Iza no azo ampiharina?
Mba hahazoana ny fampindramam-bola na fanampiana, dia tsy maintsy:
Aoka ho tompon-trano ary mipetraka ao an-trano;
Aoka ho olom-pirenen'i Etazonia ianao na monina any Etazonia rehefa avy nomena fahazoan-dàlana ara-dalàna (karatra maitso);
Aza avela ara-bola hahazo vola maimaim-poana any an-toeran-kafa;
Manàna fidiram-pianakaviana ampitomboina ambanin'ny 50% amin'ny fidiram-bolan'ny mediana; ary
Ho an'ny fanampiana, dia 62 taona no ho miakatra ary tsy ho afaka hamerina amin'ny lafin-trano fanamboaran-trano mahazatra mahazatra.
Inona no faritra manan-kery?
Ny fampindramam-bola sy fametrahana famatsiam-bola ataon'ny USDA tokantrano tokana dia manome alalana amin'ny tompon-trano any amin'ny faritra ambanivohitra miaraka amin'ny mponina latsaky ny 35000. Ny USDA dia manome pejy web izay ahafahan'ny mpangataka afaka manamarina ny adiresiny mba hamaritana ny fahalalan'izy ireo an-tserasera.
Ao anatin'ny fetran'ny mponina, misy ny fampindramam-bola sy fanampiana any amin'ny firenena 50, Puerto Rico, Nosy Virijiny Amerikana, Guam, Samoa Amerikanina, Mariana Avaratra ary Territoriales of the Pacific Islands.
Ohatrinona ny vola?
Vola hatramin'ny $ 20,000 sy fanampiana hatramin'ny $ 7.500.
Na izany aza, ny olona iray taona 62 taona na mihoatra dia mety mahazo ny fampindramam-bola iombonana sy ny vola fanampiana hatramin'ny 27.500 $.
Inona avy ny volan'ny Loan-bola na ny fanomezana?
Raha oharina amin'ny fampindramam-bola mahazatra amin'ny fikarakarana trano, miaraka amin'ny tahan'ny zanabola averina mihoatra ny 4.5%, ny endriky ny fampindramam-bola USDA dia tena mahafinaritra.
Ny tahan'ny fidiram-bola dia voafetra amin'ny 1%.
Ny trosa dia azo alaina mandritra ny 20 taona.
Ny tolotra feno feno dia ilaina amin'ny fampindramam-bola $ 7.500 na mihoatra. (Ny saram-pandraharahana momba ny saram-pandrosoana dia ny vola ampiasaina amin'ny famoahana ny politika fiantohana lohateny ho an'ny mpampindram-bola.)
Ny famatsiam-bola dia manana fetra $ 7.500.
Tsy voatery haverina ny vola azony raha tsy amidy ny trano raha latsaky ny 3 taona.
Raha afaka mamerina ny ampahany ny mpangataka, fa tsy ny vidin'ny saram-pandrenesana rehetra, dia azo omena fampindramam-bola sy fanomezana ny mpangataka.
Misy fangatahana hampiharina ve?
Raha mbola manohy ny famatsiana ny fandaharanasa amin'ny tetibola federaly isan-taona ny Kongresy , dia azo atao ny mametraka fangatahana fampindramam-bola sy fanampiana isan-taona.
Mandra-paharitra ve ny fampiharana?
Ny fangatahana fampindramam-bola sy ny fanampiana dia alaina amin'ny lamandy izay raisina. Ny vanim-potoana fanodinana dia mety miankina amin'ny fahafahan'ny vola ao amin'ny faritra misy ny mpangataka.
Ahoana ny fampiharanao?
Mba hanombohana ny dingana, ny mpangataka dia tokony hihaona amin'ny tompon'andraikitra mpampindram-bola any Etazonia any amin'ny faritra misy azy noho ny fanampiana amin'ny fangatahana.
Lalàna inona no mitantana io fandaharan'asa io?
Ny programan'ny Loan-bola sy Fanomezana tokantrano ho an'ny fianakaviana dia nahazo alalana ary nifehy araka ny Lalàna momba ny Lantam-pananana tamin'ny taona 1949 (7 CFR, Fizarana 3550) sy ny Trano HB-1-3550 Trano famoaham-bola mivantana avy amin'ny fianakaviana.
Fanamarihana: Koa satria ireo lalàna voalaza etsy ambony ireo dia mety amin'ny fanitsiana, ny mpangataka dia tokony hifaneraseran'ny mpampiasa vola USDA ao an-tokatrano ho an'ny antsipiriany ny programa misy ankehitriny.
Ny drafitra miaramila
Fahafatesana Obamacare sy fepetra takiana amin'ny fiantohana kely indrindra
Efa ho ny antsasaky ny Amerikanina no misotro toaka be
Fanampiana ara-pahasalamana ho an'ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna voarakitra ao ambanin'ny Obamacare?
Biby voalohany: biby ao amin'ny trano manga
Mitadiava Asa Fanaovana Taratasy Tsy Hita Maso
Nahoana no mifanakaiky amin'ny Repoblikana ny loko mena?
Fiafaran'ny fiarovana ara-tsosialy momba ny fiarovana ara sosialy
Ny Fanitsiana Voalohany 10 ao amin'ny Lalàmpanorenana
Nahoana no 13 volana ny fetran'ny fahanteran'ny Facebook?
Nahoana ny olona no mila fitondrana?
Ahoana no fomba fampiasana calculator siantifika
Ady amin'ny ady lehibe faharoa
Teny nalaina momba ny fitiavana sy ny fisakaizana
Italiana Verb matoanteny: Annoiare
Reiki Hand Placements ho an'ny hafa
Torolàlana momba ny fe-potoana "Fanakalozan-kevitra" amin'ny toekarena
Fanamafisana hevitra amin'ny fitsipi-pitenenana Anglisy
Ahoana no mahatonga ny marika hahatonga ny sarinao?
Ny fifanandrinana Harry Potter
Inona ny toetry ny Fiangonana Metodista momba ny firaisan'ny samy lahy na samy vavy?
10 Classic, New Orleans Mardi Gras Songs Authentic
Ny andininy momba ny fitiavana
Fanitarana ny Lalàna momba ny fanabeazana ao amin'ny oniversite, 1959
Ahoana no ataon'ireo gilasy?
Golf Shoes: Torolalana ho an'ireo mpandahateny sy mpividy
Ny fivarotana andevo Trans-Atlantika
Artemis, andriamanibavy Grika amin'ny hazakazaka
Ny mpanompo sampy sy ny fandoroana tena
English for Medical Purposes - The Pain That Comes and Goes
Inona no dikan'ny hoe "eo ambonin'ny loha"?
Inona no atao hoe vavaka?